Mica Powder, Mica lamba, loko mainty - Lingshou
Ny flakes Mica dia avy amin'ny andiam-mineraly silicate sheet, antsoina hoe mica, izay misy ny muscovite, phlogopite, biotite sy ny hafa. Amin'ny alàlan'ny dingana famokarana teknika, ny mineraly mika dia misaraka ho sombin-tariby, natokana ho vondrona loko voajanahary ary potika amin'ny haben'ny flakes. Ireo flakes tsy manam-paharoa ireo dia manome hazavana metaly voajanahary izay tsy ho tratran'ny mineraly hafa. Izy ireo dia mpiara-miombon'antoka tsara amin'ny famokarana loko lacquer sy vato ary koa fitaovana haingon-trano mahery vaika ho an'ny akanjo ivelany sy anatiny.
Main Mica Powder Fanondroana ny orinasa: 20 mesh, 40 mesh, 60 mesh, 80 metatra, 100 mesh, 200 mesh, 325 mesh, 400 mesh, 500 mesh, 600 mesh, 800 mesh, 1000 mesh, 1250 mesh ary 2500 bolongy. Azo zahana ihany koa. Ny vovony Mica dia karazana mineraly tsy misy metaly, izay ahitana karazana fanafody misy 49% SiO2 ary 30% Al2O3. Mica dia manana elasticity sy mafy toetra. Izy io dia karazana fiantohana premium ho an'ny fananana insulation, fanoherana ny mari-pana, ny fanoherana ny asidra ary ny alkali, ny fanoherana ny korosiana ary ny adhesion matanjaka, sns ... Izy io dia ampidirina amina fitaovana elektrika, lasantsy, goma, plastika, taratasy, plastika, coating, loko, seramika, kosmetika ary fitaovana fananganana vaovao sy indostria hafa. Miaraka amin'ny fampivoarana ny teknolojia, hisy fampiharana vaovao vaovao hitrandraka.
Ny vermiculite dia karazana mineraly efa misy potika izay misy Mg ary manala ny faharoa ao anaty silicates aluminium hydrated. Miorina amin'ny fiovan'ny toetrandro na hydrothermal fanovana biotite na phlogopite. Ireo sokajy amin'ny alàlan'ny dingana, vermiculite dia azo zaraina ho vermiculite tsy lafo ary mitombo ny vermiculite. Sokajy amin'ny loko, dia azo zaraina ho volamena sy volafotsy (ivory). Vermiculite dia manana fananana tsara toy ny fitrandrahana hafanana, fanoherana ny hatsiaka, fanoherana ny bakteria, fisorohana ny afo, fampidiran-drano ary ny fitrandrahana feo, sns. Rehefa atody ho an'ny 0.5 ~ 1.0 minitra eo ambanin'ny 800 ~ 1000 ℃, dia azo ampitomboina haingana ny volony amin'ny 8 ka hatramin'ny 15 impiry, hatramin'ny 30 heny, miaraka amin'ny loko niova ho volamena na volafotsy, mamokatra vermiculite miitatra tsy mihetsika izay tsy anti-asidra ary mahantra amin'ny fampandehanana herinaratra.
Lavaky ny loko, izay antsoina koa hoe karazan-tsakitsaka, sola, flake na akorandriaka sns.. Amin'ny alàlan'ny dingana famokarana teknika, dia mamorona karazana haingo hena ho an'ny endriny izay natao ho vokatra voaravaka ampiasaina amin'ny plastika sy ny akora amin'ny alàlan'ny fikarakarana sehatra maro sy ny fitsaboana simika. Ireo flakes tsy manam-paharoa ireo dia manome hazavana metaly voajanahary ary ny lalao mifanandrify tsara tarehy dia taratry ny vokarin'ny granita voajanahary sy marbra. Ity fijerena fahitana miverina amin'ny endrika voajanahary ity dia tsy ho tratran'ny fitaovana hafa. Noho izany, ny flakes loko dia manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatrao mba ho fifaninanana bebe kokoa amin'ny tsenanao.
Ny flake loko composite koa dia fantatra amin'ny hoe acrylic flake, epoxy flake, vinyl chip, loko chip. Izy io dia karazana flakes composite vita amin'ny resin acrylic amin'ny alàlan'ny teknolojia manokana. Manana fampisehoana vokatra manokana izy io, mampiseho ny fiantraikan'ny fanamboarana tsy manam-paharoa sy haingana izay tsy azo soloina amin'ny flakes hafa.
Lingshou County Xinfa Mineral Co, Ltd, dia naorina tamin'ny Aprily 2002, dia ao amin'ny Lujiawa Industrial Park, Lingshou County, Hebei, China. Mpanamboatra matihanina mofomamy mica super-fine, flakes loko, flakes composite, vermiculite sns izay manana famokarana isan-taona maherin'ny 10.000 taonina. Ny kompania dia manarona faritra manodidina ny 30,000㎡, miaraka amin'ny faritra fananganana mihoatra ny 10,000㎡ ary tranobe birao 1,200㎡. Tamin'ny taona 2003, ny orinasanay dia nomena anarana ho "Enterprise of the Observation Contract & Keep Promise" nataon'ny Bureau Bureau of Industry and Commerce;